KPDS German 2007 May uye November Mibvunzo nemhinduro
KPDS German 2007 inosanganisira May naNovember Mibvunzo yeMibvunzo neMhinduro.
Mafaira ari muPdf format.
Yakatorwa kubva paOnternet website.
ChiGermany KPDS mibvunzo kunze kwe2007 May
ChiGermany KPDS mibvunzo kunze kweHNUMX November
Kpds Mibvunzo yeGerman uye mhinduro dziri mune imwe faira.
Ipi faira ndeye mwedzi ipi inonzwisiswa zviri nyore kubva muzita refaira.
Mumisasa yedu unogonawo kuwana mazano anodiwa kuti ugadzirire kuGermany mhuri yekuongorora zvakare, Kpds, Uds, Yds, A1, A2, B1, B2.